कहाँ छन् उत्तर कोरियाली नेता किम ? तमाम हल्ला चिर्दै किमले पठाए कामदारलाई पत्र – Koshidaily
मुख्य पृष्ठराजनीतिकहाँ छन् उत्तर कोरियाली नेता किम ? तमाम हल्ला चिर्दै किमले पठाए कामदारलाई पत्र
कहाँ छन् उत्तर कोरियाली नेता किम ? तमाम हल्ला चिर्दै किमले पठाए कामदारलाई पत्र
एजेन्सी, १५ वैशाख । उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन कहाँ छन् र कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न हल्ला र टीका टिप्पणी आइरहेका छन् । कतिले उनको मृत्यु भइसकेको बताएका छन् भने कतिले गम्भीर बिरामी रहेको बताएका छन् । तर यी केवल हल्ला मात्र रहेकाे दक्षिण काेरियाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यी हल्लाका बीच नेता किमले उत्तर कोरियाको वनसनमा पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण कार्यमा खटिएका कामदारप्रति आभार व्यक्त गर्दै एउटा पत्र पठाएको समाचार पनि बाहिरिएको छ । उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार एजेन्सीले सोमबार (अप्रिल २७) मा एक समाचार प्रकाशित गर्दै किमको स्वास्थ्यसम्बन्धी हल्ला गलत रहेको बताएको छ ।
वनसन त्यही क्षेत्र हो जहाँ अप्रिल २१ र २३ मा किमको निजी रेल पार्क भएको भन्दै उत्तर कोरिया मामिला हेर्ने दी हेनरी एल स्टिमन सेन्टरको ३८ नर्थ प्रोजेक्टले जनाएको थियो । अप्रिल १५ मा सो रेल त्यहाँ देखिएको थिएन । दी ३८ नर्थ प्रोजेक्टले किमकाे व्यक्तिगत रेलको उपस्थितिलाई लिएर लेखेको छ, ‘रेलको उपस्थितिले उत्तर कोरियाली नेता र उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा त्यस्तो जानकारी दिँदैन। तर, पनि यसले किम देशको पूर्वी किनामा रहेको पुष्टि भने गर्छ।’
उत्तर कोरियाको सरकारी मिडियाले हालसालै किमले कूटनीतिक पत्रहरू पठाइरहेकाे र सम्मानित नागरिकहरूलाई उपहार पठाइरहेकाे भन्ने रिपाेर्ट प्रकाशित गरेकाे छ । तर नेता किमको “क्षेत्र निर्देशन” यात्रा वा उनका सार्वजनिक गतिविधिमा संलग्नताका तस्वीहरु भने २ हप्ताभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि रिपोर्टमा राज्य मिडियाद्वारा संलग्न गरिएकाे छैन ।
किमको स्वास्थ्यमा खरावी आएको र मृत्युसम्मको समाचार बाहिर आइरहेको बेला उत्तर कोरियाले किमको पत्र प्रसारण गर्दै भ्रम चिर्न खोजेको हो। अप्रिल १५ मा आफ्ना हजुरबुबा तथा उत्तर कोरियाका संस्थापक किम इल सङको जन्मोत्सव समारोहमा किम अनुपस्थित भएसँगै उनको स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासो व्यक्त भएको छ।
केही अपुष्ट मीडिया रिपोर्टहरूले मुटुको शल्यक्रियापछि किम गम्भीर खतरामा हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाएका थिए । तर दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले असत्य भन्दै यस्ता अनुमान र समाचारहरुलाई खारेज गरिदिएका छन् । उनीहरुको अनुसार उत्तर कोरियामा केही अनौंठो कदम चलिरहेको छ र किम वोनसन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् भन्ने विश्वास छ ।
अप्रिल १५ मा किम जाेङ का हजुरबुवा किम इल-सुङको १०८ औं जयन्तीको उपलक्ष्यमा मनाइएको मुख्य समारोहमा उनको अनुपस्थितिले उनको स्वास्थ्यको बारेमा अड्कलहरू फैलाएको थियाे । २०११ को उत्तरार्धमा पदभार ग्रहण गरेदेखि उनले कहिले पनि याे समाराेहमा उपस्थिति छुटाएका थिएनन् । यी तमाम कुराले किमकाे अवस्था विशेष केही छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ तर उनी कस्ताे अवस्थामा कहाँ छन् भने अझै यकीन पुष्टि भने हुन सकेकाे छैन ।